Inona ny Phentermine 37.5?
Phentermine 37.5, izay fantatra koa amin'ny hoe generic Adipex, dia fanafody izay tsy misy raha tsy amin'ny alàlan'ny fanafody. Phentermine 37.5 dia nankatoavin'ny FDA ary voaforon'ny 37.5mg of phentermine hydrochloride. Tsy misy fofona izy, fotsy ny lokony, ary mety levona amin'ny rano izy. Tokony horaisina araky ny toromariky ny dokotera izany, izay mazàna midika amin'ny vavony foana misy rano feno vera.
Nahoana no Phentermine 37.5 no ampiasaina?
Izy io dia natao hanampiana ny olona manana hatavezina hanary ny lanjany mora kokoa satria ny soritr'aretina mifandraika amin'ny fihenan-danja dia mihena amin'ny alàlan'ny fampiasana azy. Izany dia satria ny tombo-tsoa azo avy amin'ny fampiasana Phentermine 37.5 dia misy ny famoretana ny fahazotoan-komana sy ny fampitomboana ny angovo. Izany dia satria ny zavatra simika ao anaty pilina dia miasa miaraka amin'ny rafi-pitabatabana afovoany hamitahana ny ati-doha hieritreritra fa mahatsapa ho feno sakafo kely izy, ary maharitra kokoa noho ny mahazatra azy io fahatsapana io. Ankoatr'izay, misy stimulant izay mitazona ny haavon'ny angovo avo na dia mihinana kaloria kely aza ianao.
Fa maninona aho no mividy Phentermine 37.5?
Araka ny tatitra farany Phentermine 37.5 dia manana fahaiza-mandefitra avo raha ampitahaina amin'ny dosie hafa. Tsy dia misy norepinephrine kely dia kely ary noho izany dia sariaka ny mpampiasa. Ny ankamaroan'ny dokotera dia manome baiko anao handeha amin'ity doka ity noho ny tombony lehibe.
Ny fifandanjan'ireo tombony ireo dia ampahany manan-danja amin'ny Phentermine 37.5, satria azo antoka fa afaka mandray anjara amin'ny fihinanana sy fanaovana fanatanjahan-tena mety ny mpanao sakafo - singa roa tena ilaina amin'ny fihenan'ny lanja voajanahary sy fomba fiaina salama - nefa tsy mijaly ireo vokany ratsy izay mety hitarika sakafo be loatra mba tsy hahomby.
Zava-dehibe ny manamarika, na izany aza, ny Phentermine 37.5 dia tsy hahatonga ny mpampiasa hampihena lanja azy irery. Ny fihinanana zava-mahadomelina dia tsy hahatonga ireo fatin-kilao mihoatra ny fahalavoana hiala fotsiny. Fa kosa, ahafahana manao ny hetsika mety ny mpihinana sakafo nefa tsy mijaly noho ny fangetaheta na reraka be.
Ny fahombiazan'ity fanafody ity dia nahatonga azy io ho voalaza matetika indrindra drugs any Etazonia ho an'ny olona matavy loatra. Izy io dia afaka manampy amin'ny fomba mahomby an'ireo marary ireo hanary lanja sy hampihena ny risika amin'ny toe-pahasalamana lehibe toa ny tosidra, diabeta ary kolesterola avo.